KMF/Cnoe: “Ilaina matihanina ny politika” | NewsMada
KMF/Cnoe: “Ilaina matihanina ny politika”
“Ilaina ny tena maha matihanina amin’ny fanaovana politika. Fa tsy hirotsaka amin’ny fanaovana politika avokoa io olona rehetra tsy vonona io.”, hoy ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, manoloana ny famaroan’ny kandidà ho filohan’ny Repoblika. Tsy andraikitry ny fitondrana na ny olom-pirenena irery izany fa andraikitry ny antoko politika tsirairay avy indrindra koa: rehefa manao politika, tena manao politika fa tsy mody mialokaloka.
Maro ireo kandidà fa ny fijerinay KMF/Cnoe: raha oharina ny tamin’ny taona 2013, 49 no azo fidina, nihena ho 36 izany ankehitriny. Ny fijerinay azy, mankany amin’ny fahamatorana tsikelikely ny fanaovana politika, na misy ihany aza izany ny tsy fahamatomombanana na ny voka-dratsin’ny atao. Raha jerena amin’ireo folo nihintsana, ny nahatonga izany: misy ihany ny fanaovana kitoatoa.
Antso no atao amin’ny olom-pirenena mba ho tony, ary tokony hanajana hatrany ny lalàna sy ny andrimpanjakana.
Tsy ampy ny fanabeazana olom-pirenena
“Mety ho marika iray hoe mihamatotra ny mpanao politika ny fisiana kandidà 36. Efa nihena fa tsy 49 toy ny tamin’ny 2013 intsony. Mety manaporofo koa izay hoe be dia be ny tia tanindrazana sy te handray andraikitra eto amin’ny firenena”, hoy izy. Manaporofo izao fa tsy mbola tonga any amin’ny tanjona ilàna azy ny fanabeazana olom-pirenena.
Raha mandeha araka ny tokony ho izy izany, kandidà efa mihoatra ny folo izao, ohatra, no mivoy ny hoe: raha voafidy eo izy, hamerina ny hasin’ny vahoaka sy ny maha Malagasy. Raha misy olona folo ny miteny izany: inona ny antony tsy mampitambatra azy ireo? Ideolojia politika iray ka tokony ho kandidà iray ny hitondra azy: manohana avy aoriana ny sivy ambiny.
Misy mpihavana, ohatra, tamin’ireo 46, nilaza fa tokony hifankatia sy hiray hina. Nefa tokony hatomboka ao anatin’ilay fianakaviana aloha izay, ary mba iray fa tsy roa ny kandidà.
Mariky ny tsy fahombiazan’ny fanabeazana olom-pirenena izany, ary ilàna ny fanohizana ny fanabeazana olom-pirenena, araka ny fanazavany ihany.